Patagonia Arzantiniana: Ankafizin’ny Bilaogera Mpandehandeha sy ny Mpizaha tany any Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2013 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Ελληνικά, Français, polski, srpski, Español
(Naoty: amin'ny teny espaniola avokoa ny rohy rehetra ankoatra izay lazaina manokana)
Amin'ity vakansy fahavaratra 2013 ity dia nisafidy an'i Patagonia Arzantiniana [en] ho iray amin'ny toera-pizahantany ankafizina indrindra ny Arzantiniana. Ao amin'ny zoro natokana ho amin'ny fizahantany ny gazety Perfil no manazava ny iray amin'ny antony mahatonga io safidy io noho ny sara azo ihoriranana sy ireo toera-pizahantany maro manintona.
Saingy toerana ho an'ireo te-hahita azy amin'ny alalan'ny bisikileta ihany koa i Patagonia, araka ny itantaran'ny bilaogera avy ao amin'ny La Vida de Viaje (Fiainam-pandehandehanana), nitantara ny diany, ny zava-niainany ary ny zava-nanjò azy ireo ao amin'ny bilaogin'izy ireo:
Taorian'ny fivoizana [bisikileta] nandritra ny ora vitsvitsy hihazoana an'i Tolhuin, dia nipetraka roa andro tao amin'ny Fianakaviana Ullua izay nifandray taminay tamin'ny alalan'ny Facebook mba hahafantatra anay ary ho anay mba hahitana fonenana itoerana.
Hitanay fa manome lanja lehibe ny fizahan-tany amin'ny alalan'ny bisikileta ity zana-bohitra ity. Nisy fanomanan'ny hetsika Cicloturismo por la vida [fizahantany am-bisikileta ho an'ny fiainana] natao ho fahatsiarovana ny dokotera René Favaloro. Misy rindrin'ny fanaova-mofo La Unión malaza amin'ny fahafenoan'ny sarin'ireo olo-malaza nandalo tany amin'ny toerana. Ao amin'io toerana io ihany dia ahitana efi-trano manokana ahafahan'ny mpivoy bisikileta mandany ny alina, ary misy kahie ahafahan'ny rehetra mametraka ny sonian'izy ireo. (LVDV nanokatra ny toko 2!).
Misy koa ny bilaogera Arzantiniana, tahaka an-dry Juan sy ry Laura avy ao amin'ny Acróbatas del Camino (Mpitsingeringerin'ny lalana), nanapa-kevitra ny handehandeha amin'ny alalan'ny fanaovana auto-stop ka tsy hianona amin'ny fitetezana an'i Patagonia ihany fa ny tany manontolo. Ao amin'ny iray amin'ny lahatsoratr'izy ireo, no izaràn'izy ireo ny zava-niainany tao Puerto Madryn sy ny fanahian-dry zareo momba ny tontolo iainana. Isan-taona ao amin'ny Península de Valdéz, dia mety ho azo atao ny mahita trozona hanamboatra taranaka avy amin'ny ila-bolan-tany atsimo manamorona an'i Patagonia:
Na dia mialoha ny fahitana ny trozona voalohany aza dia eritreritra roa no mieloelo ao amiko. Voalohany, raha mihevitra ny olombelona fa zavaboary manatsaina ny biby an-drano miteraka, mampinono mora mahare zavatra manana fiteny tsy hay henoina, ny trozona angamba mihevitra ny mandeha an-tongon-droa ho mpidikiditra amin'ny raharahan'ny hafa, mpitsabatsabaka, mpitsikilokilo mpakasarin'ny fanjakan'ny biby. Toa ny sarangotin'ny fitiavana fitsikilokilovana karazam-[biby na zavamaniry] asandrany rehefa tsy manao ny mahazatra azy eo amin'ny fiaraha-moniny ny olombelona. Misy ny marina sasany manelingelina, fa ny fandefasan-tsolika ao amin'ny rezervoaram-piara dia miteraka fitomboan-kafanana amin'ny ankapobeny izay mampihena ny harihitry ny orana [biby] kely dia kely fihinan'ny trozona.
Nandeha lavitra kokoa ny lahatsoratra:
Mazava, fa tonga amin'ny alalan'ny fiara ny mpizahantany ary manaiky hanana fiara iray isan'olona ao amin'ny fianakavana, raha azo atao. Ary hita miharihary, mila manatitra ny ankizy any an-tsekoly ianao. Mampianatra azy ireo hikajy ny tontolo iainana, ohatra… Eny fa na isika aza, dia misy zava-mifanohi-kevitra ao amintsika, manakana na mampiasa fiara, na dia tsy maintsy mampahery ny tenako aza aho mieritreritra fa mba mameno toerana banga amin'ny fiara efa mandeha rahateo isi. Ary ahoana ny amin'ny trozona? Mazava fa eto ry zareo, mahafinaritra, tsotra be, mikofokofoka manodidina ny “geiser” [rano mifantsitsitra tampoka] ao an-damosiny, ny sasany irery ny hafa miaraka amin'ny zanany. Indraindray tafaraka amin'ny sambo mpihaza trozona anglisy mitady solika hanazavana ny ampirany, ankehitriny efa voaaro fatratra sy nahazo sanda ihany.
Sary nopihan'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.
Misy ihany koa ireo bilaogera, tahaka an-dry zareo mpandray anjara ao amin'ny Magia en el Camino (Majika eny an-dalana), izay tao anatin'ny Proyecto Educativo (Tetikasa Fanabeazana) fitsidihana sekoly, hopitaly, ny tanàna manodidina hanatontosa fitetezam-paritra majika:
Nankafizinay matetika ny fahitana fahamaroan'ny ankizy mandritra ny fampisehoana, fa hafa kosa izany raha eny amin'ny hopitaly, araka ny fahavitsian'ny ankizy no mahatsara azy kokoa. Tsy tokony ho ao ny ankizy fa tokony hilalao any an-tokotany. Izany no mahatonga anay hampiasa fiteny mitovy hatrany rehefa manao veloma any amin'ny hopitaly: “Maniry indrindra any am-ponay lalina izahay ny mba haha-tafala anareo araka izay haingana indrindra eto amin'ity toerana ity”. Isak'izay miteny izany izahay dia manakipy ny masony ny ray aman-dreny ka feno fanantenana.
Ahitana karazan-toerana maro ny faritra Arzantiniana ao Patagonia sy zava-boary miavaka manokana eto an-tany.